Wada Hadalo Dib Ugu Bilaabmay Kooriyada Woqooyi Iyo Maraykanka Iyo Halka Ay Ka Furmayaan - Borama News Network
Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegay iney dib u billaabayaan wadahadalladi hakadka uu galay oo ku saabsanaa Niyuukilarka, iyada oo lagu wado iney labada hoggaamiye ay ku kulmaan dalka Sweden.
Wadahadalki ugu dambeeyey ee dhex maray Madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim wuxuu ku soo dhammaaday isafagarasho la’aan.
Wixi intaa ka dambeeyey labada dalba waxay marar badan sheegayeen iney doonayaan wadahadallada iney dib u billaabaan balse ma jirin tillaabbo loo qaaday wadahadalladaasi.
Wadahadalka labada dhinac ayaa ku soo beegamaya maalma un kaddib marki ay Kuuriyada waqooyi tijaabisay gantaal kuwi hore ka duwan oo ay riddadiisu dheer tahay.
Gantaalkan ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay oo ay badda ka waxaa sida oo kale laga ridi karaa markabka gujiska.
Tijaabadan cusubna waxaa la sheegay iney caddeyn u tahay Kuuriyada Waqooyi inay awood u leedahay iney gantaalla ka riddo meel ka baxsan dhulkeeda.
Kulankan looga gogol xaadhayo labada hoggaamiye iney kulmaan waxaa ka qayb galaya dhanka Mareykanka Ergeyga gaarka ee Mareykanaka u qaabilsna Kuuriyada waqooyi Stephen Bigen iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Gil.
Gantaallada ayaa loo malaynayaa in laga ganay meel u dhaw magaalada dekadda leh ee Wonsan, waxa ayna socdeen ilaa 450km ka hor inta aanay ku dhicin badda Japan.
Milateriga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalladu ay sare u kaceen ilaa 910km.
Tijaabada ayaa waxa ay imanaysaa saacada un kaddib markii Pyongyang ay sheegtay in wadahadallada ku saabsan sidii lagu baabi’in lahaa nukliyeerkeeda ee ay Mareykanka kula jirto ay igu dambayntii dib u bilaaban doonaan Jimcaha.
Wararka waxay soo ifbaxeen markii mas’uuliyiinta ay ku warrameen in Kuuriyada Waqooy ay tijaanbisay hubka mid kamid ah gantaalkana uu ku dhacay badda Japan.
Ra’iisul wasaaraha Japan, Shinzo Abe wuxuu cambaareeyay tijaabada gantaallada Kuuriyada Waqooyi kuwaas oo uu ku sheegay inay ahaayeen labo gantaal, xukuumadda Tokyo waxay sheegtay in mid kamid gantaallada uu kusoo dhacay biyaha Japan gaar ahaan aagga gaarka ah ee dhaqaalaha.
Dhanka kale, miliatariga Kuuriyada koonfureed waxay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay ugu yaraan mid kamid ah gantaallada riddada gaaban kaaso oo ay u gantay dhinaca badda bariga ku taalla ee gacanka Kuuriya.
Afahayeenka dowladda Japan Yoshihide Suga wuxuu ka dhawaajiyay inay u muuqato in labo gantaall ay kuuriyada waqooyi tijaabisay mid kamid ah uu ku dhacay badda Japan.
Tijaabadan hubka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa imaaneysa saacado uun kaddib markii xukuumadda Pyongyang ay shaaca ka qaaday in wahadallada ku saabsanaa barnaamijka nukliyerka ee lagu waday inay dhexmaraan Mareykanka ay dib u bilaabmayaan dabayaaqada toddobaadkan.
Wadahadalladan ayaa ah kuwii ugu horreeyay tan iyo bishii Febraayo markii uu fashilmay wadahadalladii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, waxay labada dhinac u muuqdaan kuwo sii kala fogaanayo.
Dadaalka diblumaasiyadeed ee uu wado Trump ayaanan waxbo ka qaban halista Nukliyerka ee ka imaaneyso dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
Wufuud kala Duwan Oo Ku Soo Qulqulaya Magaalada Kismaayo
Axmed Madoobe ” DAWLADA DHEXE WIXII AY NAGA TABANEYSO DIYAARBAAN U NAHAY INAAN XALINO..